मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विप्लव नेकपाको समर्थन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा बढी शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह - City Post Daily
मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विप्लव नेकपाको समर्थन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा बढी शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह
September 21, 2019 September 21, 2019 मुख्य खबर
काठमाडौं, ४ असोज । चितवन मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले गरेको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई विप्लव नेकपाले समर्थन गर्दै उनीहरुको माग पूरा गर्न मेडिकल कलेज प्रशासनलाई अनुरोध गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रेस विज्ञेप्ती जारी गरेर विद्यार्थीहरुको माग तत्काल हल गर्न अनुरोध गरेको छ र समाधान नगरे आफ्नो पार्टी हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ः ‘नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षाको अध्ययनमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य माफिया र दलालहरुले संविधान कानुन र औपचारिक निर्णयसमेतलाई लत्याएर लाखौं अवैध असुली गरिरहेको जगजाहेर नै छ । त्यसको विरुद्ध चितवन जिल्लास्थित ‘चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)’मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आफ्ना जायज मागहरु राखेर शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्ष गर्दै आएका छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा समस्यालाई विषयान्तर गर्दै हाम्रो पार्टीसँग जोडेर विद्यार्थीहरुमाथि दमन गरेर आफ्नो कमजोरी र बदमासी ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । केही दिनअधि कलेज प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिले त्यसको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ समस्याको विषयान्तर नगर्न र आफ्ना विद्यार्थीको संविधान प्रदत्त, कानुनसम्मत र न्यायपूर्ण माग पूरा गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा समस्यामाथि हस्तक्षेप गर्न पार्टी बाध्य हुनेछ ।’
यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चितवन मेडिकल कलेजलाई तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चर्काइरहँदा त्रिविले भने कारबाहीका लागि कुनै संकेत नदेखाई बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले यसअघि तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने भन्दै त्रिविले कलेजको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत वर्षको असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क तोकेको थियो । तर चितवन मेडिकल कलेज प्रशासनले तोकिएभन्दा बढी रकम अशुलेपछि विद्यार्थीहरु झण्डै तीन सातादेखि आन्दोलनरत छन् । त्रिविले विद्यार्थीहरुलाई समेत वार्तामा बस्न भनेको छ । वार्ताबाटै सबै समस्या समाधान हुने भन्दै त्रिविले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन नगर्न भनेको छ ।
यस्तै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको माग राख्दै शनिबार माइतीघर मण्डलमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरिएको छ । चितवन मेडिकल कलेजलगायतमा मेडिकल माफियाले नियम भन्दा धेरै शुल्क लिएकोमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रर्दशन भएको हो । ‘सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलाइन्स’ ले गरेको प्रर्दशनमा डाक्टर केसी पनि उपस्थित थिए । उनीहरूले ‘ओली ज्यू स्वास्थ्य उपचारको महत्व तपाईंले जति कसले बुझ्ला ? तर विद्यार्थी लुट्ने मेडिकल माफियाहरू प्रति तपाईं सधैं मौन ?, विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरू लाई कारबाही गर, सरकार किने माफियाले संविधान बचाउने कसले ? लगायत नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रर्दशन गरिएको छ । मेडिकल शिक्षाको शुल्कसँग पैसा तिर्ने अभिभावक र पढ्ने विद्यार्थीहरु संग मात्र नभएर आमनागरिकहरुले बिरामी हुँदा खानुपर्ने सिटामोलसंग पनि सम्बन्धित रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थीको अगुवाइमा भइराखेको लुटतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पोखरामा डेङ्गु नियन्त्रण अभियान शुरु
जुवा तास खेल्ने ८ जना पक्राउ